Wednesday June 20, 2018 - 17:22:56 in Maqaallo by Radio Maanta
Meelaha uu tegayo iyo masaariifta ku bexeysa. Kuwa arrimahan wax ka qoraya waa dad ay aqoonttoodu aad uga hooseyso mowduuca ay ka hadlayaan oo Shaqada Madaxweynaha (his job description) ka dhigay wax ay garan karaan ama ay qiimeyn karaan dadka mustawahoodu intaa la’eg yahay.
Shaqada Madaxweynaha waa wax aad iyo aad uga weyn, ugana qoto dheer, qiimeyn uu sameeyo qof aqoontiisu hooseyso sida kuwa ku dhiiradday qoraalada maalamahan socda, siiba kii ugu dambeeyay oo ka bixinaya tafaasiil masaariifta iyo lacagaha ku baxa safarrada Madaxweynaha iyo baahida ay qabaan shaqaalaha dowladda. Bal halla weydiiyo meesha uu ka soo xigtay tafaasiisha uu bixinaayo hana cadeeyo (the sources) iyo meelaha laga soo minguuriyay!!!
Socdaalka Madaxweynayaasha aadduunka waa arrin qofka caadiga ah uusan qiyasi karin ha ahaato xagga ”protokolka”, xarumaha ay degayaan, meelaha ay siyaranayaan, sida ay ku tagaan meelaha loo qoondeeyay inay soo maraan, kharajka ku baxaaya arrimahaan ma ahan wax uu garan karo mid aan magaciisa oo saxa ah qori karin.
Masaariifta ku bexeysa inta aan kor ku xusan waa mid qarsoodi ah (highly confidential expenses) oo xataa dadka la socda Madaxweynaha aysan ogaan karin.
Maskiinka maqaalka soo qoray wuxuu u maleyaa inuu Madaxweynaha markuu doono iska bixi karo, meeshuu doono tegi karo, ma oga mana garto in loo baahan yahay martiqaad ku xiran muddo xadidan iyo maalmo tirsan oo aad u kooban laguna tala gelayo arrimo ay ugu weyn yihiin amniga madaxda, meelaha ay deggayaan, kharajka ku baxaya oo dib dambe loogu xisaabtami doono…shirarka ay madaxdu ka qayb geleyso, gaadiidka loogu tala galay inay adeegsadaan… wafdiga la socda Madaxweynaha waa mid ruux waliba wax loogu tala galay, meesha ay tegayaana hore loo qoondeeyay, barnaamijka loo dejiyayna aysan ka baaqan karin…laakin kuwa maalmahan wax qoraya ma oga in maalinta iyo saacadda ay dalkaas ka soo baxayaan horey loogu heshiiyay.
Ma qiyaasi kartaa hoteelada ay seexdaan Madaxweynayaasha iyo dadka la coda inta lagu seexdo habeenki?..qaarkood waxaa laga yabaa inay ka badan yihiin mushaharka Madaxweyne Afrikaan ah, mangaabtuna waxay moodaa in Madaxweynaha uu isagu bixiyo kharajka!!!
Su’aal : Madaxweynuhu ma tegi karaa meel aan laga martiqaadin?
Meelihi uu tegtay Madaxweyne Xasan Sheikh, inti u jagada haayay,waxay ahaayeen meelo munaasib ah oo si rasmi ah loogu martiqaaday (haddii loo baahdo waa tirin karnaa) lagana sugaayay in Somaliya ka muuqato meesha. War ma adiga oo kale ayaa qiimeyn kara (presidential state visits & journeys) safarrada kuwa mudan in la aado iyo kuwa aan mudneyn…waa maxaay aaladaha loo adeegsan karo in lagu qiimeyn saffarrada aan loo baahneyn in la aado…iyadoo saaxiibkey soo qoray si loo yareeyo masaariifta.
Marna suurta gal ma ahan in la ogaado masaariifta ku bexeysa safarrada, waayoo waxaa bixinteeda iska kaashada meelo badan oo ay adag tahay si lagu garto…masaariifta qaar waxaa ballanqaada waddamada martida loo yahay, sida gaadiidka i.w.m. haddii ay wadamadu yihiin qaar taagtoodu liidato waxaa bixiya beesha caalamka ay ugu weyn tahay Qaramada Midoobay iyo deeq bixiyeyaasha. Dowladihi dalka soo maray deymihi lagu lahaa oo ay ka mid ahaayeen safarradi iyo hotelladi qaarkood weli lama bixin, qaarna waa la cafiyay..waxaan hubaa inaadana waxaa war u heyn.
Saadaalin laga yaabo inaad aad ugu faraxdiin adiga iyo inta kula mida waxay tahay in Somaliya aysan dowlad dambe noqon doonin inta ay siyaasad ka hadlayaan dad aan garashadoodu gaarsiisneyn heerki la rabay..waa markuu jaahil Madaxweynihi dalka shaqadiisi wax ka sheego, madaxweynaha tuuladana tokliisu u sacbiyo.
Waxa jirta maahmaah dheheysa LO’DI GO’I rabta dibi dhalow ay bilaawdaa Somaali burburi rabtana wada siyaasi iyo madaxweyne ay noqdaan.
Muddo waa hakiyay inaan wax qoro markaan arkay marxalada dalka iyo meesha ax wax maraayaan, waxaanse hadda rabaa inaan wax ka qoro ifafaalooyin soo baxay oo ah in dowlad goboleedka Jubbada Hoose uu Kenya u hibeeyay gobolka. Kan Koofur galbeedna u ballan-qaaday Ethiopia inuu Xamar dafahiisa dejiyo, Baraawe iyo Markana lagu biiriyo labada furdo ee Boosaaso iyo Berbera oo horey loogu hibeeyay iyo Garoowe oo gooni isu taageysa iyadoo ku tiirsan taagta Ethiopia!!!
SOMAALI SOCOTAYE HA LA SAGOOTIYO!!!
DIB HA LOO XASUUSTO MAQAALKI HORE OON SOO CELIN DOONO CINWAANSKIISUNA AHAA” SOMALIA: NOBODY’S LAND” DAL AAD DAD LAHAYN!!!